Ukuvakashela iwayini izifunda e-Europe iphupho lawo wonke connoisseur iwayini. izivini ngokumangalisayo enkulu, sezulu efudumele futhi libalele, emagqumeni enchanting, nokudla okuhle ichaze kulezi zifunda iwayini phezulu. Uma ungumthandi wewayini futhi ufuna ukubona ama-Wineries ahamba phambili eYurophu nokuthi Ungafika Kanjani Lapho, Londoloza Isitimela kuzokusiza uthole khona!
Funda ku-ukwazi ukuthi Europe oluyohlala abathandi iwayini. Sibheka ukuthi ngabe usuvele uyipakile engqondweni yakho ngaphambi kokuqeda le ndatshana!
I Rhone Valley iwayini esifundeni has kangaka ukuba anikele kusuka kwamasiko umbono nge Lyon engomunye wabayishumi UNESCO Sites. Nge elula yayo, gastronomy eyiqiniso, I Rhone izulu iwayini labathandi nge iwayini odumile Crozes-Hermitage, ICote-Rotie, kanye neChateauneuf-du-Pape yokudweba izivakashi zewayini ezivela emhlabeni wonke.
I Tuscany wineries ukunikeza ephelele iwayini lizwe nakho. Akukhona ukuthi iTuscany iqukethe ezinye kuphela E-Italy ukubekisa okwaziwa kakhulu, like entsha Val d'Orcia DOC, Vino Nobile di Montepulciano, kodwa isifunda naso sigcwala ukuziqhenya, uthando bezwe, nenjabulo okukhulu ukulihlanganyela nabanye.
Uma ungathanda ukuba ungahleli siqu Tuscany iwayini lakho uhambo, ungathembela kubuchwepheshe bomhlahlandlela noma umshayeli. Sivame ukuqasha imoto futhi sikwenze thina, kodwa sakwenza abe umshayeli yangasese Montalcino ngubani Kwasithatha emhlabeni wethu stop pre-okuhleliwe. Kuyindlela omkhulu ukuya uma ukhathazekile you`re mayelana ukushayela endaweni noma ufuna ukuphuza iwayini esikhundleni amathe ke.
Sonke siyazi eJalimane zayo ubhiya nezimoto, kodwa kuze kube manje, besingazi ukuthi banesifunda sewayini sokukhahlela izimbongolo futhi.
Phakathi Koblenz futhi komngcele Luxembourg amanga endala iwayini esifundeni yaseJalimane. kakade, amaRoma ebone okuthile okuhle esikhathini efudumele micro-sezulu kanye inhlabathi enothe. Namuhla, izivini zesifunda saseMoselle zikhiqiza amaRieslings amahle kakhulu emhlabeni.
Umndeni kuphela ukhiqiza Riesling ku zabo 4.2 amahektha komhlaba zinezikhathi ukulinganisela phakathi asidi isakhiwo. Iwayini elihlonishwa ngokujulile lisatshalaliswa emhlabeni wonke. Uma ungathanda ukunambitha iwayini on-site, qiniseka ukuba ukubhuka aphoyintimenti kusengaphambili.
viticulture wamaqhawe: Kuyinto umusho ngokuvamile baqashwe ukuchaza ukulima ebukeka nzima. Lavaux, ISwitzerland yisifunda esivelisa umqondo ngokuphelele.
Okokuqala amehlo akho setha phezu masimu ayo emaweni, ubhekene usindwa impracticality konke. (Ikakhulukazi uthumele amabhodlela ambalwa ewayini). Babonakala UNESCO njengoba uhlelo lemihlaba yelanga, lolu hlangothi olubusiswe ilanga lweLake Geneva luveza indawo yezinganekwane zamabhalkhoni agcwele izimbali, anombala ocwazimulayo nasemanzini aluhlaza ukuthi kungenziwa kuphela okunye phelelisa nge ingilazi Chasselas wendawo. Ngokufanayo, iziza zayo echibini-ukwangana ikhuphuka ngesikhathi kakhulu ama-slants okufanele avunwe imbuzi yethimba neqembu kuphela.
Idolobhana waseLausanne ngokuphelele elitholakala kolunye Lavaux. Kwenzela iphuzu elihle lokubuka i- ukuhlola esifundeni. Phakathi Switzerland, empeleni Lausanne ungumnikazi iningi uma kuziwa izivini. (Umasipala ungumnikazi wesifunda esikhula iwayini esingelincane kune 62 zebhola, bakhiqize bafike 400’000 amabhodlela ngonyaka.)
Yenza izikhwama zakho futhi ukushaja ingilazi yakho. Isikhathi sokubamba isitimela noma ezimbili ukubuka ama-Wineries ahamba phambili eYurophu. Londoloza Isitimela izokunikeza amathikithi asheshayo nangabizi ngaphandle kwezimali ezifihliwe. Ulindeni? Yisikhathi sokuthi uthole iwayini lakho, ku!
#I-EuropeWine #TrainandWine #iwayini #ukuwina #winetastinginEurope europetravel iwayini winetour